Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ugwu ugwu Kilauea | Network Meteorology
Ugwu ugwu Kilauea Ọ bụ otu n'ime ugwu mgbawa 5 mejupụtara agwaetiti Hawaii. A maara ya n'ụwa nile maka ịbụ otu n'ime ụwa kacha arụ ọrụ. Aha ya sitere na asụsụ Hawaii ma pụtara "ịtụ" ma ọ bụ "ịgbasa." Aha a bụ n'ihi na ọ bụ otu n'ime ugwu mgbawa na-achụpụ lava na gas ọtụtụ ndụ ya.
Na nke a, anyị ga-eme nyocha miri emi banyere njirimara ugwu mgbawa na ụdị ihe ntiwapụ nke mere na ụbọchị ndị a. You chọrọ ịma ihe niile gbasara ugwu ugwu a ama ama?
1 Njirimara ugwu Kilauea
3 Ọgbawa Kilauea
4 Ugbu a
Njirimara ugwu Kilauea
Ọ bụ ugwu mgbawa nke kwesịrị ka ìgwè nke ọta ugwu mgbawa. Ọ na-abụkarị ihe mejupụtara ya kpamkpam. Akara ya karịrị ịdị elu ya. Kpọmkwem, ọ tụrụ mita 1222 ma nwee caldera na nzukọ ya nke dị ihe dị ka mita 165 na obosara ise.
Ọ dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti Hawaii ma yie ugwu mgbawa dị nso a na-akpọ Mauna Loa. Ruo ọtụtụ afọ ndị sayensị chere na Kilauea bụ usoro etinyere na Mauna Loa. Agbanyeghị, site n'ọmụmụ ihe dị elu, ha matara na o nwere ụlọ magma nke gbatịrị maka ihe karịrị kilomita 60. Ugwu a anaghị atụkwasị obi na ya ịrụ ọrụ ya.
N’etiti elu ọnụ ụlọ ime magma bụ obere oghere dị gburugburu nke dị ihe dị ka mita 85. Aha ya bụ Halemaʻumaʻu. Nke a pụtara na ọ bụ otu ebe kachasị rụọ ọrụ ugwu mgbawa na ụlọ ahụ dum. Ndagwurugwu nke ugwu mgbawa adịchaghị mma ma ị nwere ike ịsị na elu ya dị larịị.
Ihe kpatara na ọ bụ otu ọkụ ọkụ ọkụ na-agba ọsọ na agwaetiti Hawaii niile n’ihi na ọ bụ ya bụ ọdụdụ nwa. Volcanoes na-ebelata ọrụ ha kemgbe ọtụtụ afọ. Agwaetiti niile nke mebere Hawaii dị na ebe dị ọkụ n’Oké Osimiri Pasifik. Ihe mere ha jiri pụọ iche bụ na ugwu ọgbụgba ọkụ ndị a anaghị efe gafee ebe tektikal, n’adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ.
Ugwu ọkụ Kilauea malitere n'ụzọ dị otu a. Ihe magma n'ime ụwa jiri nwayọ gbagoo n'elu ebe ebe a na-ekpo ọkụ dị. N’oge ahụ, jiri ọtụtụ ihe na-ere ọkụ, ala ụwa apụghị ịnagide nrụgide ahụ wee gbajie. Ọkpụkpụ a mere ka magma gbagoro n'elu ma gbasaa ebe niile.
N'ozuzu, ugwu mgbawa niile nke otu ọta bụ nsonazụ na-aga n'ihu nke mmiri lava na-aga n'ihu. Emebeghi ihe a n'ime ọnwa ole na ole, mana ọtụtụ nde afọ gafere nke a.
Ugwu a, na mbido ya, dị n'okpuru oke osimiri. Mgbe nchịkọta nke magma, o biliri ọtọ ihe dị ka 100.000 afọ gara aga. Nke a bụ obere nwata maka ugwu mgbawa. Caldera bidoro ịdị na ọkwa dị iche iche sọọsọ otu ijeri afọ na ise gara aga. Ya mere, ọrụ ha miri emi. 1500% nke elu caldera bụ mmiri na-asọpụta nke na-erughị otu puku afọ na otu narị. N'aka nke ọzọ, 90% nke elu ugwu na-agbọpụta ọkụ dị n'okpuru 1100 afọ. Oge ndị a dị oke ala maka ugwu mgbawa. I nwere ike ịsị na ọ ka bụ nwata.
Mostdị nkume kachasịkarịsị na anyị nwere ike ịhụ na Kilauea ọ bụ basalt na picrobasalt.
Dị ka e kwuru na mbụ, ọ bụ otu n'ime ugwu na-arụsi ọrụ ike na mbara ala ma na-arụ ọrụ kemgbe oge mgbawa mbụ edepụtara. O mere n’ihe dị ka afọ 1750. Ihe ka ọtụtụ n’ime ọrụ mgbawa ugwu ya mere n’agbata afọ 1750 na 1924. Agbanyeghị, ọrụ a pere mpe karịa nke mechara. Ọ dị ka a ga-asị na ugwu mgbawa na-amalite injin. Na 1924, ọ nwere ihe mgbawa mgbawa na ruo 1955 ọ nwere obere mkpirisi.
Mgbawa nke ugbu a na ugwu ugwu Kilauea a na-akpọ Pu'u O'o ọ bido n’afọ iri atọ gara aga. Ọ malitere na Jenụwarị 30, 3. Apụtara ya site na mpụta nke lava a wụrụ awụ na ogologo nke kilomita 1983 n'ogologo. Ka ọtụtụ afọ agafeela, ọ na-agbapụta ụfọdụ ome na-aga n'ihu ma nwayọ.
N’ọnwa a nke Mee 2018, ugwu mgbawa nke Kilauea bidoro mgbawa nke lava na o mere ala ọma jijiji dị ukwuu ruru 6,9 na 5,7. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke lava a chụpụrụ, ọganihu ya na mmeghe nke nnukwu oghere megidere ndị agha nchekwa ka ha nwee ike iwepụ ha. A chụpụrụ mmadụ 1700 n'ụlọ ha.
Lava emebiwo ihe dị ka ụlọ 35. N'ime obodo kachasị emetụta anyị na-achọta Leilani Estates na Lanipuna Gardens, ebe lava kpuchiri ụlọ, n'okporo ámá ma malite obere ọkụ. Ihe ize ndụ nke ugwu mgbawa abụghị naanị lava, kama ikuku ndị na-apụta. A na-eme ka gas dị iche iche na-aga n'ihu site na mgbawa ndị na-emebi ahụike mmadụ. Otu gas ndị na-agbapụta bụ sọlfọ dioxide, nsị dị ike.
Ndị ọkachamara na-azọrọ na ezigbo ihe egwu nke ọgbaghara nke ndị a hụrụ onwe ha na ya Ọ bụghị lava ejections, mana gas na-ebute. Enwere mpaghara mgbaji buru oke ibu na mgbawa ọwụwa anyanwụ, ọ bụ mpaghara adịghị ike. Magma malitere ịkwaga na ịga n'akụkụ ahụ. N’ezie, ọdọ ọdọ mmiri nke ndagwurugwu ahụ ejirila ihe karịrị otu narị mita gbadata n’ime ụbọchị ole na ole.
Lava nwekwara ụfọdụ ihe egwu, ebe ọ na-agbawa ọtụtụ oge. Agbanyeghị, ndị mmadụ nwere ike ịgbapụ ọsọ ọsọ lava ma ọ bụrụ na ha tọrọ atọ. Bịaru nso nwere ike ịdị ize ndụ n'ihi ikuku gas.
Na foto a, ị ga-ahụ mmebi nke ugwu ugwu Kilauea kpatara:
Lava na-etinye oke ohia n’ọkụ
N'ime ime ụlọ magma
Foto elu igwe nke gbawara
A kpọpụrụ mmadụ 1700
Na vidio a ị nwere ike ịhụ n'onwe gị otu lava si aga n'ihu:
Dịka ị pụrụ ịhụ, Kilauea, otu n'ime ugwu mgbawa na-arụsi ọrụ ike n'ụwa, na-eme akụkọ ihe mere eme ọzọ na ndụ ụmụ amaala nke Hawaii.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọkụ ọkụ ọkụ Kilauea